Bankiga aduunka oo Maalgalinaya dib u dhiska Goobaha laga Qabsadey Daacish ee Dalka Ciraaq | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Bankiga aduunka oo Maalgalinaya dib u dhiska Goobaha laga Qabsadey Daacish ee...
Bankiga aduunka oo Maalgalinaya dib u dhiska Goobaha laga Qabsadey Daacish ee Dalka Ciraaq
Washinton( SONNA)- Bangiga aduunka ayaa maanta ogolaaday 400 milyan oo doolar oo dib loogu dhisayo degaanada Ciidamada Ciraaq ay ka xoreeyeen argagixisada al-Qaacidda.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in madaxda Bangiga aduunka ay iminka qorsheynayaan qaabkii ay uga qeyb qadan lahaayeen kaabayasha kale ee dhaqaalaha dalkaasi Ciraaq ee ku burburay dagaalka sida Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Mousil,khadka Tareenada iyo isgaaarsiinta kale.
Bayaan uu soo saaray Bangiga aduunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in lacago kale oo dheeri isla markaana gaaraya $ 350 milyan oo deg deg aheyd uu Bangigu ogolaaday in la bixiyo bishii tagtay ee July,lacagtaasi oo iyana loogu tala galay mashaaricda horumarinta Todobo magaalo oo ciraaq ka tirsan kuna yaal Gobolka Diyala.
Cidamada Xukuumadda Ciraaq oo kaashanaysa Ciidamada kale ee Isbaheysiga gaar ahaan kuwa Mareykanka ayaa dagaal muddo 9 bilood ka socoday magaalada Mousil kadib ayu suurta gashay inay kooxda Daacish dib uga qabsadaan.
Masu’liyiinta Ciraaq ayaa ku qiyaasay dib u dhiska magaalada Mousil in uu socon doonto muddo 5-Sano ayna ku bixi doonto Malaayiin Doollar.
Previous articleXeer ilaaliyaha Qaranka oo ugu Baaqay Warbaahinta Dalka inay ka qeyb qaadato Hormarka
Next articleW/Diinta iyo Awqaafta JFS oo 400 oo kutubo ah ku wareejisay Jubbaland